६ वर्षका बालकको कमाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
६ वर्षका बालकको कमाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
By Newsdesk December 18, 2017
एउटा ६ वर्षीय बालकले कति आम्दानी गर्छ ? तपाईं भन्नुहोला यस्तो सानो उमेर बच्चा काम गर्छ र ?
तर, रायन हरेक हप्ता युट्युवमा खेलौनाको समिक्षा गर्छन् र यसको बदला उनले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
रायनले अघिल्लो वर्ष ११ मिलियन अमेरिकी डलर कमाई गरेका थिए । जनु नेपाली रुपैयाँमा १ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ ।
युट्युवमा रायनको भिडियो करोडौँले हेर्छन् । उनको रायन टोयजरिभ्यु नामको एउटा युट्युव च्यानल रहेको छ ।
स्टारको सूचीमा नाम
यस युट्युव च्यानलमार्फत रायन आफ्ना भ्युअर्सहरुलाई खेलौनाको दुनियामा लैजान् । फोर्ब्स पत्रिकाले उनलाई सन् २०१७ मा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने स्टारको सूचीमा राखेको छ ।
सन् २०१५ को मार्चमा शुरु गरिएको रायन टोयजरिभ्युका भिडियोहरु १६ अर्बभन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ ।
यति चर्चित भए पनि रायनको बारेमा धेरै जानकारी कसैलाई थाहा छैन । उनको पूरा नाम के हो ? कहाँ बस्छन् ? भन्ने थोरैलाई मात्र थाहा छ । मात्र यति थाहा छ कि उनी अमेरिकी हुन् ।
हालै वासिङ्टन पोष्टमा रायनको आमाले दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘युट्युव च्यानलको सोच उनी तीन वर्षको उमेर हुँदा नै आएको थियो । रायन सानो उमेरदेखि नै खेलौनाको समिक्षा गर्ने टिभी च्यानलहरु खुब हेर्थे ।’
रायनकी आमाले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा भनिन्, ‘एक दिन रायनले मलाई भन्यो कि किन ऊ अन्य बच्चाहरु जस्तो युट्युवमा छैन । त्यही बेला हामीलाई लाग्यो कि हामी पनि यो गर्न सक्छौँ । हामी तुरुन्तै खेलौनाको पसलमा गयौँ र एक लेगो ट्रेन किनेर त्यहाँबाट शुरु गर्यौँ ।
रायनको एउटा भिडियो ८० करोडभन्दा धेरैले हेरेका छन् । मार्च, २०१५ बाट शुरु भएको च्यानलले सन् २०१६ को जनवरीसम्ममा १० लाखभन्दा धेरै सब्सक्राइबर्स पाइसकेको थियो । हाल रायनको च्यानलमा १ करोडभन्दा धेरै सब्सक्राइबर्स रहेका छन् ।